တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်နှင့် ကျယ်ပြန့်သောမဟာဗျူဟာမြောက် ဆွေးနွေးပြောဆို - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်နှင့် ကျယ်ပြန့်သောမဟာဗျူဟာမြောက် ဆွေးနွေးပြောဆို
စစ်တောင်းမြစ်ရေသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မဒေါက်မြို့တွင် စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်သို့ကျော်လွန်ရောက်ရှိလာ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်(ဒရုန်း)စမ်းသပ်ပျံရေး အခြေစိုက်စခန်း တာဝန်ထမ်းဆောင်
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ဆွေးနွေး
သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က (၁၈)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာပေးပို့
သမ္မတရှီက BRICS လက်တွေ့ကျသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အဆိုပြုချက် ၅ ရပ်တင်သွင်း
ကပ်ရောဂါအခြေအနေတွင် တရုတ်-အာဆီယံကုန်သွယ်ရေး တိုးတက်လာအောင် အားဖြည့်ပေးသည့် လမ်းကြောင်းသစ်
တရုတ်-အာဆီယံ နည်းပညာဖိုရမ်ကို တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ကျင်းပမည်
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပိတ်ရက်မရှိကျင်းပသော တရုတ်-အာဆီယံ (အွန်လိုင်း) ကုန်စည်ပြပွဲ မြင်ကွင်းများ နှင့် အကျိုးရလဒ်များ
တရုတ်နိုင်ငံက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံထံ သန်းနှင့်ချီ၍ တန်ဖိုးရှိသော ထောက်ပံ့မှုများ ပေးအပ်ရန်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအား ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တက်ရောက်မည်
တရုတ်အာကာသယာဉ်မှူးများက အာကာသမှနေ၍ ဟောင်ကောင်လူငယ်များနှင့် စကားစမြည်းပြောဆို
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်း၊ ရေနှစ်သွယ်သွားလေယာဉ်က တရုတ် လေကြောင်းပြပွဲတွင် တင်ဆက်ပြသမည်
တရုတ်နိုင်ငံက 5G ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုအား တိုးချဲ့လျက်ရှိ
အာဖဂန်အနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီသည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းစဉ်ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် ပြောကြား
ဂီနီနိုင်ငံအား အနောက်အာဖရိကန်နိုင်ငံများ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်း
တိုကျိုအိုလံပစ်ကျင်းပရေးကော်မတီကို လာမည့်နှစ် ဇွန်လတွင် ဖျက်သိမ်းမည်ဟု ဆို
အာဖဂန်အမျိုးသမီးများ ကျောင်းတက်ခွင့်ရှိ ၊ သို့သော် အမျိုးသား-အမျိုးသမီး သီးသန့် အခန်းများ၌သာ သင်ကြားရမည်ဟု တာလီဘန်ပြော
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ကလေးငယ်များ COVID-19 ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက်မှု စံချိန်သစ်တင်
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ Daraa ပြည်နယ်တွင် သူပုန်များ စွန့်ခွာသွားပြီးနောက် ပြည်သူများ နေရပ်သို့ စတင်ပြန်လာ
ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအား ရောဂါထိန်းချုပ်ကုသရေး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ လှူဒါန်းကူညီပံ့ပိုးပေး
ထောင်ဖောက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အစ္စရေးက ဂါဇာအနောက်ဘက်ကမ်းတွင် ပိတ်ဆို့မှု တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်
ဂီနီနိုင်ငံ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဖွဲ့စည်းမည်ဟု ဆို
တရုတ်နိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ ယခုနှစ်ကုန်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ သန်း ၁၀၀ စာ ထပ်မံ လှူဒါန်းမည်ဟု ရှီကျင့်ဖိန်ပြောကြား
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် အားကောင်းသောမုန်တိုင်းကြောင့် လူ ၃ ဦးသေဆုံး၊ ၃၁ ဦးပျောက်ဆုံးနေ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက အာဖဂန်ဒုက္ခသည်များ လက်ခံရန် အသင့်ရှိကြောင်း ပြောကြား
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ အသက်ကို ကယ်တင်ရန် ကြိုးပမ်းစဉ် ရုရှားအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီးသေဆုံး
ရုရှားနိုင်ငံက တာလီဘန်အား အသိအမှတ်ပြုရန် မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်း ကရင်မလင်နန်းတော်ပြော
တူရကီနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သက်သေခံကတ်ပြားအတု ထုတ်ပေးမှုဖြင့် သူနာပြု သုံးဦး အဖမ်းခံ
အစ္စရေး ဆေးရုံ၌ ရှားပါးသည့် ခေါင်းချင်းဆက် အမြွှာ ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်
ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲက ဂီနီနိုင်ငံ၌ အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
၇၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကို နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ ၈၃ ဦးတက်ရောက်ရန် မျှော်လင့်
International Army Games 2021၏ “Clear Sky”ပြိုင်ပွဲများ အားလုံး အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး ၊ တရုတ်နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့က ပထမဆု ဆွတ်ခူးရရှိ
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအရေးနှင့် COVID-19 ရောဂါတုံ့ပြန်ရေး ကိစ္စရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင် ရှုံးနိမ့်မှုများကြား
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် : နားရွက်ထဲမှ လေထွက်သွားခြင်း သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုခြင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ပြည်နယ် ၄၉ ခုတွင် COVID-19 ၏ Mu မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိ
လူဝီစီးယားနားပြည်နယ်၌ Ida မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတစ်ပတ်အကြာ သေဆုံးသူ ၁၃ ဦးရှိ ၊ ပြည်သူ ၅၀၀,၀၀၀ ခန့် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်နေ
အတိုက်အခံများနှင့် ဆွေးနွေးစဉ်အတွင်း ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရက အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုများအား အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆို
အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် Ida မုန်တိုင်းကြောင့် မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့် လူ ၄၀ ကျော် သေဆုံး
နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်း တရုတ်နိုင်ငံက စီစဉ်ကျင်းပ
သမ္မတရှီကျင့်ဖိန် ၆ ကြိမ်မြောက် အရှေ့စီးပွားရေးဖိုရမ်(EEF)ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှုတည်ငြိမ်ရေး ပြန်လည်ရရှိအောင် ကူညီရန် တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောကြား
သင့်အနေဖြင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု မပြုလုပ်နိုင်ပါက တစ်စုံတစ်ရာကြံစည်မှုကို မပြုလုပ်သင့်ပါ
ပေကျင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဇက် အာရ်. ဘိုင်ဒန် Joseph R. Biden ထံမှ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုကို လက်ခံပြောကြားခဲ့ကြောင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့သည် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမျှဝေလျက်ရှိသော ဆက်စပ်ကိစ္စရပ်များအပေါ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သော မဟာဗျူဟာဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆွေးနွေးဖလှယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Sept. 10 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Friday morning tookaphone call from his U.S. counterpart, Joseph R. Biden, and the two leaders held candid, in-depth and broad strategic communication and exchanges on bilateral relations and relevant issues of shared interest. Enditem
Photo taken on Sept. 24, 2015 shows the national flags of China (R) and the United States as well as the flag of Washington D.C. on the Constitution Avenue in Washington, capital of the United States. (Xinhua/Bao Dandan)